बुधबार नेपाली बजारमा कुन देशको मुद्रा कतिमा कारोबार हुदैछ ? – PrawasKhabar
बुधबार नेपाली बजारमा कुन देशको मुद्रा कतिमा कारोबार हुदैछ ?
२०७७ फागुन १२ गते १२:१३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमय अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११६ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ । युरोपियन एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ, बिक्रिदर भने १४१ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी पाउण्ड एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १६३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचि अनुसार कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३८४ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ । साथै बहराइन दिनारको खरिद मूल्य भने ३०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रि मूल्य ३०८ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ ।
साथै साउदी अरेबिया रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७६ पैसा बिक्रि मूल्य ३१ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।